Shir Beeleed Axadii ka Dhacay Guriga Jwxo-shiil – Rasaasa News
Oct 21, 2011 Shir Beeleed Axadii ka Dhacay Guriga Jwxo-shiil
Habeenkii Axada October 16, 2011, waxaa guriga uu Jwxo-shiil ka degan yahay magaalada London isugu tagay dad ay tiradoodu kor u dhaaftay lixdan ruux oo dhamaantood beeshiisa ah.
Dadka ku kulmay guriga, ayaa ka kala tagay dhamaan dalalka Yurur, waxayna ahaayeen dadka ugu muhiimsan Jwxo-shiil, ee sida beesha ah ku wada kooxdiisa beesha ah.
Sida ay noo sheegeen dad war soo sulxiyey, waxaa uu kulanku ahaa wada tashi beeleed oo uu Jwxo-shiil doonayey in uu fikirkooda dhagaysto iyo is waraysi ku saabsan wax ka hadhay Jabhadii beesha.
Runtii waan isku daynay in aan helo talada ay gaadhay beeshu, laakiin wali nooma suurto galin in aan helo xogta oo dhan, waxaase la sheegayaa in ay isku raaceen in ayna jirin Jabhadnimo dambe oo ay beeshii ka sii faa,iido, loona baahan yahay in la ogolaado danta.
Kulanka iyo go,aamada waxaa go,aamiya horena u go,aamin jiray guurti jinfada Jwxo-shiil, ah dabadeedna Jwxo-shiil, ayaa kooxda gaadhsiin jiray.
Kulanka beesha, ayaa dhacay xili habeenimo ah si ayna dadka maalintii la shaqeeya indhahoodu ugu dhicin dhaqdhaqaaqa tashiga ah ee u dhaxeeya beesha, kooxduna ku go,aan qaadan doonto.
Maadaama uusan fiicnayn caafimaadka maskaxda Jwxo-shiil, waxaa matalayey kulankana kala waday Yuusuf Cadami, oo ahaa la taliyaga gaarka ah eeJwxo-shiil.
Kulankan waxaa ka horeeyey kulan ay Jwxo-shiil iyo Cadami, kula yeeshay isla guriga sarkaal Somalida Kenya ah oo darajo hoose leh lagana soo diray Nairobi, sida la aaminsan yahayna fariin ka waday Gaandi iyo Dawaare. Ergaygan oo lagu gaabiyey magaciise Bare waxaa kharakiisa bixiyey Mustafe wakiilka dhaqaalaha ee Jwxo-shiil, oo fadhigiisu yahay Dubai.
Ergaygan ayaa waxaa uu waday fariin ah, qaata nabad shuruud la,aan hadii kale ku tala gala in la idinka soo qaban dalalka aad ku nooshihiin.
Fariinta, ergay Bare oo ay kooxda Jwxo-shiil hore u sii ogayd iskuna diiday in ay go,aan isku raacdo, ayaa aha nabad qaata, kolka la qeexan ah ‘cafis Ethiopia ka dalbada’. Masuuliyiinta Somalida Kenya ayaa si,aan gabasho lahayn gacanta u hayey kooxda Jwxo-shiil, ka hor intii aan talada lagala hoos bixin.
Masuuliyiinta Somalida Kenya oo dhawr goor u soo jeediyey Ethiopia arimo ku saabsan kooxda ayey Ethiopia ku gaabsan jirtay ha yimaadaan.
Waxaa muuqata in kooxda laggaga adkaaday gudaha dibadan ay arintoodu ku koobantay Internet iyo maro la babb-biyo kolka ay dhacayaan shirarka caalamku.
Waxaa jirta hadal hayn ah “abeesana sugid kuma hadhin Xamarna saari kuma hadhin”, in Ethiopia ay cafiso Jwxo-shiil iyo kooxdiisa siiso ayna yimaadaan Ethiopia si ay arinta cafisku u dhacdo. Waxaa arinkaas diiday doortayn in sida Qadaafi ay u dhintaan Maxamed Ismaaciil Cumar [qaaxo] iyo Maxamed Cabdi Yaasiin [macalin Diirane].
Sida ay warku sheegeen, waxaa Nairobi shir loogu qaban doonaa xubnaha raba in ay qaataan cafiska, ka dibna waxay aadi doonaan Addis Ababa sida la sheegayo.
Lagama yaabo in uu Jwxo-shiil, ka qayb galo kulamada ama uu tago Addis Ababa, sababa caafimaad awgood, waxaana matali doona Maxamed Macalin [seedi].